Madaxweyne Farmaajo oo hakiyey dhismaha darbiga Balad Xaawo iyo shir ku saabsan oo barri furmaya – Marqaanmedia24.com
March 26, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 35
Guddoomiyeha Gobolka Gedo Maxamed Maxamud Maxamed oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu la xiriiray dhiggiisa dalka Kenya Uhuro Kenyata, iyagoona si gaar ah u gorfeeyey xaaladda ka taagan magaalada Balad Xaawo.
Guddoomiyaha ayaa xaqiijiyey in labada Madaxweyne ay isku afgarteen shir heer sare ah oo ku saabsan arrinkan, lana qaban doono maalinimada barri ee talaadada ah, iyadoona Madaxweyne Farmaajo uu arrinkan guddi u xil saaray.
DAAWO SAWIRADA; Agaasimaha HS&J Soomaaliya Col. Kofi oo booqday safaaradda Soomaaliya ee Abuu Dhabi+Sawirro
DEG DEG: Qarax xoogan oo goordhow oo gil gilay Muqdisho
1991 Markii uu Bilaabmay Boobki Qaranka ee USC & SNM ay Hogaaminaayeen ayaa waxaa Bilaabmay in Dawladaha deriska ahi ay Qorsheeyeen siday uga qayb geli lahaayeen Boobkaas oo weliba Xulafo somali ah ay u sameysan lahaayeen. Dawladda Kenya waxaa Hunguri ka Galay Degmada Beled Xaawo. Ethiopia waxaa Hunguri ka Galay Laba Meelood sida
2-Dekedda Berbera >>>> Dekedda Berbera way ku Guuleysteen Sababta oo ah Beesha Dhexe iskuma Kalsoona oo waxay doonayaan in ay Laaluush u siiyaan Ethiopia 19% wixi Berbera Faaiido ka soo Gala si ay Isaaquna u helo ICTIRAAF iyo in Ethiopia ay ka difaacdo wixi kaga yimaada SOMALIDA kale.
Ethiopia Kama Furi karto Somaliland Somaliyada kale sababta oo ah” internationa law” baa Qabanaya iyo Xeerki ay Dhigeen ”U.N Security Council” Marka Beesha dhexe hadda 26 bay Riyoonayeen welina riyaddi bay ku jiraan,Khiyaali iyo male awaal ayaa la isku maaweeliyaa.
Viva Midnimadda & Qaranimadda Somaliyeed.
Viva Federal States Of Somaliya
Warsangalina mahadlayaa?! Waaa aduunyo gabagaba ah oo AYAAANTIII SHIIGA LAJOOGO.
DUBAYS BAA YAABAY.
Beled xaawo needay armaajo waydii,caato meedey armaajo waydii,waar xassan qoslaaye ayaaba dhaamay,saa isaga taako dhula lagama qaadin.
ARMAAJO LAGU QASAARAY
Ninkii shalay labaxsaday gaadhiga tiknikadaa ahaa ee 5 ta bkm saarnaayeen iyo qoriga dhishiigaha ahaa wuxu 🙅 noqday ⚠ WARSANGALI, gaadhigana waxa lahaa ✌ ❎ Cumar maxamuud.
Allsanaag news baa qosolkii iga dbameeyay maanta.
Viva Xassan sheeq, mudaaharaad Xassan Lagu dalbanayo ayaa dhacaya kooxda 8 feb wey soconayaan, farmaajo Xoolo wuu ku daayey!! Dreamerskii riyoonaayey bal aan arakno in dowlada soo socota taakeeraan tani galbatey tu kale mooye!!
Mujaahid waan ku salamay miyaanan kuu sheegin inuu xawar dhahar ka hilaacayo.
Sxb Bal ii sheeg xagay Dhahar kaga taalaa gobolka sanaag ?
Dhahar waa magaalo sl ah oo gobolka sanaag ku taala,kkkkkkkkk.hadaan kuu sii sharaxo waa sanaag bari,waana dhulka hoos yimaada badhan.
Waar ma kuu dhacday.
Iga guddoon salaantii saldanadda ee tan Islaamka ee barekysan lagu cadareeyay.
Horta gari Alley taqaan ee waa run iyo hadal dhab ah in aanu Hartiga maalinkan maanta ah hadal u bannaanayn. Puntland waa tan tiicaysa oo tolweynihii lahaa aan la is wada tusi karin. Bal meel kale iska daa ee halkan Marqaan ah u fiirso. Hartigii ayay ka dhex qaraxday oo xataa ay maanta maraysaa in laba Cumar Maxamuud ahi la isku daawado iyaga oo dibi sidooda isu hardinaya.
Labadaas Cumar Maxamuud na labadeenii Warsangeli ayay geesaha na dareen. Sidaas oo ay tahay isbaheysiga Irir Samaale ee Marqaan na dhan bay ka soo wada jeesteen oo ay weliba labada Cumar Maxamuud ah qumaaati jeebadda ugu riteen. Kooxdii yarayd ee ‘Somaliland’ sheeganeysay na Puntland oo laba jibbaar ka sad ballaadhan ayay sinsaare iyo suuldaar isugu dartay. Gaw!
……..Goroyooy Gabbal Kuu Dhac!
Waar maanta habartii caasha cawad,ka dayrisay kute cidna nooma maqna ceelna noma qodna,kkkkkkk mase qaadkiba u gooyay,yaaaaaaaaaaaaaaab
Caasha cawad oo kadayrisay.kkkkkkkkkkkkkk
Dhahar Horta ma Hoos timaado Badhan. mana aadan garan jawaabti. Weligaa meel aadan garanayn ha ka hadlin.Dhahar wey ka fogtahay Badhan.
Sheekadaadu waa tii Reer Hargeisa ” Dee waanu Naqaanaa ”
Maantana duqdii huubadii bay saydhinaysaayee dhan uga baydh yayna kugu siidayne..
ISHA IGALASOO BAX BAA YAABAY.
Sarkaalkii shalay kasoo goostay pl,waxa laga sadex xidigle,waana ninka loo dirayo inuu ka hilaaco dhahar,waanu argagaxnay baa qardho ka dhici doonta,
Haaaa waan gartay sxb deee goordanbaan waxfahmaa mujaahid, kkkkk show ninkaba kaarto AYUUB baaa loogu yeedhay , ana waan yaabayaay oon mahaaa maxaa ALSANAAG.COM ka qeeylisiiyay ooo arkay.
Rageedii sxb.mahadsanid suldaan.
Shalay baaa iigu wardanbysay isagoo leh CAR GAROWE iigu kaalaay intaaad TUKARAQ soo dhaaftaan, deee nimankii dhabayaco baabaa xanaaqo yidhi ma in garowe IDOOR keentaabaad rabtaa oonu qaxno.
Shaahii baan Ku qufacay.
Bal waxaad ii sheegtaa sanaag waa imisa degmo,meel gaban baan wax kaa tusayaaye.
Waaar nabadeey dhamaantiin caffis. Xamaalasho time.
X saalax Scarborough baaan dhex ordayaa see u soon suldaan.
North York baa yaabtay!
@ Suldaan Prof Cismaan Cawad ”Royal Family” May allah Bless Him
Suldaan Salaanti Saldanadda Maakhir Coast ee wadatey udgoonka Saxansaxada silsiladaha Surad.
Suldaan Reer Tolkeen majeerteen caqli xumo bay isku haystaan oo isku khilaafsan yihiin anigu waxaan la yaabay tolow maxaa isku diray ?
Suldaan Kuwan kuwan Isaaq anigu kama Werwero waayo waxaan ogahay sheekadoodu inaysan meelna gaadhayn oo ay ka tahay LAAB LA KAC.
Suldaan xitaa Barwaaqo wey isaga carartay markay garatay in somaliland ay tahay ”Sheeko Baraleey” iyo wax aan natiijo lahayn.Isaaqiina iyagaaba la kala celin la’yahay London Dhexdeeda. Habeen dhoweyd Habaryonis iyo habar jeclo baa loo kala baxay mukhaayadda somalida.
Sxb ma sanaagti aan ku dhashay baad adigoo ka yimi Togdheer su’aal iga weydiinaysaa.Gobolka sanaag wakhti dawladdi siyaad bare waxay ahayd
1-Degmadda Ceerigaabo…….Multi-culture City
Lixdaas degmo baan anigu ku ogaa inta kale waa tuulooyin Sida
Waa tahay zxb Scarborough igu salaan meesha waa la ii faaniyaa,kolay maruun baan iman inshalaah.
Leicester baa yaabtay
Waar siyaad bare kahor imisa degmo ayuu ahaa,anaga hanoo soo tirin 18 gobol ee afweyne xaaranta ku sameeye.
Waayo arag baa yaabay
Suldaan aad baan kaaga mahadinayaa xaqiiqadaas aad na la wadaagtay. Suldaanoow qoladan meelahan la niiqniiq leh ma oga ee waxaan had ba ku cayaaraa ‘a psychological game’ oo badankoodu course aan qaadanayo ayay iigu yihiin ‘study subjects – mise guinnea pigs’. Waxaan u adeegsadaa taaktikada loo yaqaanno ‘prompting’ si aan uga fatihiyo sida aan qoraalkayga kore ka sameeyay. Waxaa kale oo aan cayaaraa ‘playing the devil’s advocate’ si aan maankooda iyo quluubtooda waxa ku duugan uga liso kkkkkkkkkkkkkk. Macallinkayga ayaa yaabay oo jacel in uu akhristo qoraallada aan qoladan casharro ahaan uga dhiibo.
Xataa magacyo ‘patients’ ahaan ah ayay wada leeyihiin. Suldaan, excatly sida aan qiyaaso ee ‘anticipated reaction’ loo yaqaanno ayay dabinnada aan u dhigo ugu wada dhacaan oo ay iska fatahaan. Macallimiintaydu waxay x. saaqid, Somali iyo sOmalilander ku sheegeen in ay la xanuunsan yihiin waxa loo yaqaanno ‘learning disabilities with a degree of mental retardation’ kkkkkkkkkkkkkkkkk.
Caasho awad waxyabaha qaadku wax utaro waxaa kamida,wuxuu siiyaa shahaado phd ah qolka yar ey kubarjeynaysana wuxuu kadhigaa madaxtooyadii.
Miirowgii baa yaabay
@ Suldaan Prof Cismaan Cawad ”Royal Family”
SULDAAN …..kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Dhulka
Ma garan wayday zxb suaashii?kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Anaa kaaga jawaabaya sanaag waa sadex dagmo kuwaasi oo si rasmiya uga regist gareeysan qaramada midoobay,waana kuwan.
Sidaa darteed ayay badhan u tahay dhulka hoos yimaada degmada badhan.
WAAR MA KUU DHACDAY,DABLOOOW
Kkkkk odaygii CAWAD ahaa maanta ishaa dheer.kkkkkkkkkk qoraalkii xitaa waa uu kari la’yahay…..kkkkkkk
Saxid; sidaa awgeed ayay dhahar u tahay dhulja hoos yimaada degmada badhan.
@ His Royal Highness Suldaan Danab La Ridey,
Horta Suldaanoow maanta laga billaabo waxaan kuu aqaanaa SULDAAN DANAB waayo danab la ridey sidiisa ayaad cayayaankan u basambaasisaa xaqiiqdii. Suldanoow mid kale na maanta iga qor oo waxaa weeye in uu qofka magaca ‘Somali’ wataayi ama reer Woqooyi yahay ama se Iljeexda Ogaadeeniya lu soo koray. Waa uun labadaas mid ee ma aha Koonfuraawi haba yaraato ee.
Waa reer Woqooyi is qarinaya mise waa Iljeexda Ogaadeenka ku dhex koray haddii kale reer abti ayay u yihiin oo waa hore ayaan anigu tabay. Xoogay lahjadaha ayuu xariif ku yahay oo uu wax iskugu kaaya maldahaa laakiin waa hubanti in uu labadaas aan sheegay midkood yahay. Isaga oo dhaar cad ku mara ayuun baynu kaga rumeysan karnaa haddii uu inkiro na. Taas iga qor Suldaan.
CAASHA CAWAD MEEQA MIDAB BAY YEELATA MARKEY BARJEYSO,QAADKAA WAX U TARA.kkkkkkkkkkkkkkkkk.
Waar yaadaheen, imika ma qofku qabiilka uu yahay inuu sheego lagu dhaariyo ayay maraysaa?
Dhaartii baa yaabtay
Habartii cawado oo marqaan ka qaxday,kkkkkkk
saaxiib anoo aan arag bogaan baan boga ka sareeya waxaan fariimo ku xabaalay daran dooriya, markaan furay bogaan oo aan akhrinayo fariintaada tiiraanyada badan baan waxaan is iri wuxuu fariintaan galiyey fariintaydii kadib waayo waxaad u moodaa in fariintaydu ay taada “response” u ahay ha yeeshee walee iyo billee anoon arag taada baan galiyey fariimahayga.hadalkaagu waa run balse yaa dilay isbahaysigii hartiyeed soow idinka maaha iyo dhoocisha atariisho
hadalka ahaa “labada nin oo cumar maxamuud oo la kala hayo”
hadalka afkayga baad ka daftay oo mudo haatan laga joogo 1 sano iyo bar hayan ka badnayn waqtigaasoo uu dhacay dagaalkii suuqa darxumo halkaanoo laga adkaaday dowlada puntland ee uu hogaaminayo ninka dhiciska ah ee masiibada alle usoo diray majeerteen
raganimadu waa dacare waa anigiii liqi waayey oo ay iga dagi wayday guushii aan heli jiray markay joogi jirtay cumar maxamuud iyo beesha sacad waxa ii diiday inaan helaa hadahoo aan dawladii puntland daadihinayo. deeto waa anigii afka qaylo ku shubtay oo or iyo eedaan qayliyey. halkaas markay marayso waatii dagaalkii MAXJARKU BILAAMAY hadaba waa anigii u digay beesha cumar maxamuud oo maxaa la gudboon meeshaan usoo dhigay inkastoo maqaaladaas ay diideen inay daabacaan lamyada websiteska laga leeyahay. long story make it short-fariintaydu waxay ahayd reer cumar maxamuudoow gaas waa nin jilicsan ha ku tala galinina ee iskiina qaab beeleed ciidamada cumar maxamuud inta ooda laga qaado gaalkacyo sidii dhici jirtay ha dhacdo oo qaab qabiil wax halagu xaliyo.
hadaba dhoocisha atariisho baa markaas cay iyo afxumo meeshaan iisoo dhigtay anna waa anigii diiday inaan u jawaabo, waa anigii fariin duluc wayn xambaarsan meeshaan dhoocisha ugusoo xabaalay. waxaa hadaladayda ku jiray “war heedhe yaysan dhicin in dadka kaleeto inagu sheekaysan oo la dhihin 2doodii baa moogaana halkaan isku caynaya” waatuu diiday oo dhagaha ka furaysftay. anna waa anigii meeshaanba isaga tagay isaga daraadiis intii aan is caayi lahayn.
waxaad markhaati ka tahay sababta ini iyo ninka wata SOMALI uu nooga holcay dhexda yada dagaal ba’an inay ahayd maxaad ninka cumar maxamuud ATARIISHO ugu wacaysaa? iyo wali caada hadalo ka reeban raganimo. isna waa isagii malaha door biday “silence” mooryaana waa isagii kadaba qaatay oo dusha uga dhacay
waa taad ogayd dirir is muquuno iyo ficilo ah inaan la galay mooryaan somali taas oo runtii aabi iyo gardaro igu ahayd maadaama aan danaanis xaalkaygu ahaa, taasi waxay dhacday kadib markaan arkay inuusan iska daafici karin oo uusan lahayn raganimo uu cadawga ku eego
war dhoocishu haday sharaf iyo raganimoba leedahay gaas bay nici lahayd. qofka ay dhibi wayday ceebta gaas miyaa dhibsanaya dagaal uu ini illa galo.maxaa gaas loo caaynayaa bay halkaan lasoo tagan tahay dhoocishu-yaa dhagaysanaya?
marka hadalkja aad iigu duurxulayso saaxiib waa ku aan horaantiiba ogaaye maaha inaan qafoole ahay-ee maaro baan isaga waayey haatana waa anigaan qabatimay protectionism